African Tourism Board Sachigaro Anoparadzira Meseji yeTariro kuKilimanjaro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board Sachigaro Anoparadzira Meseji yeTariro kuKilimanjaro
African Tourism Bhodhi • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
African Tourism Board Sachigaro Meseji yeTariro
Achitakura meseji yetariro yekusimudzira kushanya mu Africa, Sachigaro weAfrican Tourism Board (ATB) Cuthbert Ncube akashanyira Mount Kilimanjaro, nzvimbo yepamusoro soro muAfrica, aine vamiriri vakuru vebhodhi rake.
Sachigaro weATB anga ari kuchamhembe kweTanzania kubva svondo rapfuura, achitora chikamu cheFirst East African Regional Tourism Expo (EARTE) yakapera kutanga kwesvondo rino.
Achiperekedzwa nechikwata chemamishinari anokosha eATB anobva kumarudzi akasiyana siyana eAfrica, Sachigaro weATB akashanyira Marangu, Kumusoro kweKirimanjaro National Park.
Vakashanyirawo gedhi rekupinda kwenzendo dzekukwira Mount Kilimanjaro.
The African Tourism Bhodhi (ATB) Kushanya kwaSachigaro kuGomo reKilimanjaro kwakaratidza kuzvipira kweBhodi kusimudzira kushanya kweAfrica, ichiparadzira meseji yetariro yekudzoka kwekushanyirwa kubva mukuparadzwa kwedambudziko reCOVID-19 uye musimboti webudiriro yedunhu neyepakati peAfrica.
Gomo reKilimanjaro nenzvimbo dzayo dzakatenderedza ndeimwe yenzvimbo dzinotungamira dzevashanyi dzekushanya mudzimba, dunhu, uye mukati-Africa uko zviuru zvevazororo vemuno vanopedza zororo reKisimusi neGore Idzva nemhemberero dzeIsita.
Tanzania yakavhenekera yakakurumbira "Rusununguko Torch" pamusoro wegomo reKilimanjaro makore makumi matanhatu apfuura, zvinofananidzirwa kupenya mhiri kwemiganhu uye nekuunza tariro pakanga paine kupererwa, rudo paive neruvengo, uye kuremekedza paive neruvengo. Asi zvegore rino, vanokwira kumusoro weGomo reKilimanjaro, saka sevamiririri veATB, vari kutumira shoko retariro kuti Tanzania ne Africa inzvimbo yakachengeteka yevashanyi panguva ino apo nyika iri kurwisa denda re COVID-60 kuburikidza nemajekiseni uye mamwe matanho ehutano.
Mushure mekusiya Kilimanjaro, Sachigaro weATB nevamwe vake vakashanyira Mkomazi National Park, iyo chete chipembere chinochengeta mhuka yemusango muEast Africa. Iri paEastern Arc's Pare Mountains, paki iri pasi pevatariri veTanzania National Parks (TANAPA) uye inowanikwa makiromita zana nemakumi maviri kumabvazuva kweguta reMoshi mudunhu reKilimanjaro pakati pekuchamhembe nekumaodzanyemba kweTanzania safari macircuit.
Zvipembere zvinodzivirirwa mukati mematanda anoyera makumi mashanu nemashanu-sekiromita, iri mukati mepaki mazana matatu nemazana maviri nemakumi mashanu nemashanu. Vashanyi vanogona kuona idzi mhuka dzechipiri dzakakura kwazvo dzemuAfrica zviri nyore kupfuura idzo dziri mumapani emusango. Zvipembere nhema zvaifamba famba zvakasununguka pakati peMkomazi ne Tsavo ecosystem inovhara Tsavo West National Park muKenya.
Pamwe chete ne Tsavo, Mkomazi inoumba imwe yenzvimbo dzakachengetedzwa zvikuru pasi rese. Mkomazi, padivi peRwizi rweUmba, inogara tsoko dzinoverengeka dzisingawanzoitika dzinofamba mukati memasango erwizi. Iyo paki ine semi-yakaoma mamiriro ekunze aine bimodal kunaya kwemvura pateni. Paki iyi zvakare yakapfuma mumarudzi ezvipuka. Vanopfuura mazana mashanu emarudzi eshiri akanyorwa mupaki, aine akati wandei akasarudzika maruva nemhuka. Iri pakati penzvimbo shoma dzakachengetedzwa muTanzania ine huwandu hukuru uye hunoonekwa hwegerenuk uye huwandu hwakakura hweBeisa Oryx. Iyi paki ndeimwe yemasavna akapfuma muAfrica uye pamwe pasi rose maererano nenhamba yezvisingawanzo uye zvinogara zvipenyu nemiti zvinoratidzwa nekuvapo kwembwa dzesango uye chipembere nhema.
Panguva yekushanya kwavo kuTanzania kubva svondo rapfuura, VaNcube vakapa ATB's Continental Tourism Award 2021 kuna Mutungamiriri weTanzania, Samia Suluhu Hassan, mukuremekedza kuzvipira kwake mukusimudzira kwekushanya kweTanzania. Kupa mubairo weABB kumutungamiriri wenyika yeTanzania kwakaitika panguva yekuvhurwa zviri pamutemo kweFirst East African Regional Tourism Expo (EARTE) yakaitirwa kuchamhembe kweTanzania guta revashanyi reArusha. Mutungamiri anga atungamira mukunyora zvinyorwa zveRoyal Tour zvine zvekushanya kuTanzania, pakati pezvimwe zvaakange atora kusimudzira kusimudzira kwekushanya muTanzania neAfrica.